Mpanamboatra plastika mandeha ho azy, mpamatsy - China Factory plastika mandeha ho azy
Masinina fanamafisam-peo vita amin'ny karazana CNC vaovao
Fampiharana sy ny endri-javatra 1.Welding Type: marindrano mitsivalana sy fantsom-pandehanana. Rafitra fanaraha-maso ny tontonana PLC, afaka manitsy ny mari-pana fanafanana, ny fotoana ary ny tsindry arakaraka ny masontsivana entina manodina., Mety amin'ny takelaka thermoplastic mihodina sy mihodina vita amin'ny HDPE, PP, PVC, PVDF, PPN, PPH …… 2. Rafitra fanaraha-maso Siemens PLC, efijery 7-inch touch-Siemens. 3.Branda vaovao mifangaro vaovao, rafitra fandefasana azo itokisana, miorina amin'ny asa ary ambony i ...
Fampiharana sy endri-javatra SUD-BO1530 andian-dahatsoratra dia manana fiasa mahery miaraka amin'ny fampisehoana tsara, mora ampiasaina, matevina ary mateza. Izy io dia ampiharina betsaka amin'ny hazo, dokam-barotra, PVC, PE, PP, PPH, akrilika, takelaka plastika alimika sns. 1.Adopt fampiasa milina mavesatra, mamorona milina fanodinana karazana planina CNC, matanjaka kokoa, azo antoka. 2.High marina Taiwan linear mpitari-dalana, avo lenta helika fitaovana famindrana. Milamina kokoa, avo lenta kokoa. 3. Fanamafisana manohana, hamarino tsara ny fandefasana ...
Masinina fanapahana ravina plastika mandeha ho azy
Fampiharana sy ny endri-javatra 1.Ny fahatapahana feno tanteraka, azo antoka ary madio. 2. Fahaizan'ny manitsy avy hatrany ny hafainganam-pandrefesana araky ny fitaovana samihafa, tsotra sy mety amin'ny fiasa. 3.Unique mandeha ho azy fanadiovana sy dedusting rafitra, miantoka ny vovoka ho esorina troroughly, fanapahana ho mora sy shavings mba ho nangonina tsara; 4. Rafitra sensor an'ny lohalaharana sy aoriana, haingana sy marina amin'ny fametrahana; 5.Saw rafitra fanamafisam-peo, mamaha ny fametahana sy mampiato ny toerany ...
Masinina plastika mandeha ho azy mifangaro sy mihodina milina
Fampiharana sy karazana fanamafisana ny endri-javatra: fantsom-pandrefesana sy fantsom-pandehanana. Rafitra fanaraha-maso ny tontonana PLC, afaka manitsy avy hatrany ny mari-pana, ny fotoana ary ny tsindry arakaraka ny masontsivana ny fitaovana eo am-pamolavolana., Mety amin'ny takelaka thermoplastic sy lasitra mihodina vita amin'ny HDPE, PP, PVC, PVDF, PPN, PPH …… Rafitra fanaraha-maso Siemens PLC, efijery mikasika ny loko 7-inch-Siemens. Tabilao vaovao mifangaro vaovao, rafitra fandefasana azo itokisana, miorina amin'ny asa ary avo lenta amin'ny fanatanterahana ...
Masinina fusion plastika mandeha ho azy
Milina fanenjana plastika mandeha ho azy
Fampiharana sy karazana fanamafisam-peo: ny plastika miondrika avy amin'ny 0-145 °. Rafitra fanaraha-maso ny tontonana PLC, afaka manitsy avy hatrany ny mari-pana, ny fotoana ary ny tsindry arakaraka ny masontsivana ny fitaovana eo am-pamolavolana., Mety amin'ny takelaka thermoplastic sy lasitra mihodina vita amin'ny HDPE, PP, PVC, PVDF, PPN, PPH …… Rafitra fanaraha-maso Siemens PLC, efijery mikasika loko 7-santimetatra-Siemens. Tabilao vaovao mifangaro vaovao, rafitra fandefasana azo itokisana, miorina amin'ny asa ary avo lenta amin'ny perfor ...